၁ နှစ်တောင် Training မယူလိုက်ရပဲ ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ကြတဲ့ Idol ၉ ယောက်
3. WANNA ONE’s Lai Guanlin
WANNA ONE ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ တစ်ကိုယ်တော်အနေနဲ့ လှုပ်ရှားလျှက်ရှိတဲ့ Lai Guanlin ရဲ့ သင်တန်းကာလကတော့ ၆ လမျှ ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Miss A ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေသူ Suzy ကတော့ Idol တစ်ယောက်အဖြစ် ပွဲထွက်နိုင်ဖို့အတွက် ၁၀ လမျှအချိန်ယူပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
KARA ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဘ၀တစ်ပါးဆီကိုပြောင်းရွှေ့လို့သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Goo Hara ရဲ့ Training ကာလကတော့ ၃ လပဲ ကြာမြင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
6. KARA’s Kang Jiyoung
KARA ရဲ့ နောက်ထပ်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သူ Kang Jiyoung ရဲ့ Training ကာလကတော့ ၁ လတောင်မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ ၂ ပတ်မျှသာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက် ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
7. Apink’s Jung Eunji
Apink ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့လည်း လှုပ်ရှားလျှက်ရှိတဲ့ Jung Eunji ရဲ့ Training ကာလကတော့ ၂ လ ဖြစ်ပါတယ်။
8. Super Junior’s Ryeowook
Super Junior ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Ryeowook ရဲ့Training ကာလကလည်း ၂ လပဲ ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။